Izinzuzo ze-Cloud Computing kunye neCCSP Certification
ithunyelwe nguRishi Mishra
Iingenelo ze-Cloud Computing
Isiqinisekisi seNgcaciso seSizwe soKhuseleko lweNgugu-izixhobo zayo kunye nezibonelelo
Injongo kunye neenzuzo zekhosi
Inqaku elidumiweyo eliqhelekileyo kwi-IT yehlabathi-i-computing yefu, ibhekisela kuhlobo lwekhomputha apho i-computational assets ezifana ne-CPU, i-RAM, i-bandwidth, i-disk space, njl. Ezi mpahla zidalwe yinkonzo eyisiseko yamaseva angokwenyama ayishiywe kwiinkcukacha ezigcinwe kakhulu kugxininisa kwi-co-ops yangaphandle. Isimo esingavumelekanga sokuzilungelelanisa, ukuchaneka kunye nomgangatho ongaqinisekiyo kwiindleko ezigxilwe yizona zibonelelo ezibalulekileyo okanye ukuqonda izinto ze-computing yefu. Ukongezelela ukucima ukutshabalalisa kweempahla njengoko isebenzisa 'ukuhlawula njengoko usebenzisayo' bonisa apho abaxhasi abaphelayo kufuneka bahlawule kuphela impahla eyicelayo baze bayidle.
I-computing yamafu sele iqalile ukukhawuleza ukunyathela ukuhamba ngokubambisana kunye nemibutho ebininzi kunye neyona ncinane emhlabeni jikelele usebenzisa amandla e-computing yefu ukwenzela ukufezekisa iinjongo zoshishino lwabo nokwandisa isandla esiphakamileyo kwiziko lezoshishino.
I-Security Certified Certified Professional okanye iCCSP yiphumo lokubambisana phakathi kwe-Cloud Security Alliance (CSA) kunye ne-ISC), ikhosi eyenziwe ukuxhasa nokusebenzisa izatifikethi ezimbini ezikhoyo: (ISC) ISatifikethi seLwazi loKhuseleko lweNkcukacha.
I-computing yamafu njengoko kuchazwe ngasentla inokwethenjelwa, iyakwazi ukulungelelanisa kunye ne-savvy. Nangona kunjalo, ulawulo luhanjiswa kwi-intanethi evulekile eyenza kube yingozi kwi-risitri yeengozi zangaphandle. Ngokweemeko ezinjalo, ukuqonda ifu ngokuqulunqa ingozi yokuphepha kwedata kunye nokudala iinkqubo zokunciphisa impembelelo yabo kubaluleke kakhulu. Imibutho ephakamileyo ayinakukwazi ukulahlekelwa yoshishino lwazo oluyisiseko kwaye kweso sakhono sidinga abaqeqeshi abanekhono abanolwazi kunye nekhono lokusebenzisana ngempumelelo nayiphi na ingozi.
Inkqubo ye-Cloud Security (CCSP) esuka kwi-Innovative Technology Solutions ijolise ukukulungiselela zonke iinkcukacha ezibalulekileyo malunga namandla okwenza ifu, i-provisos inokhuseleko engasetyenziswa kakubi, kunye nendlela yokuyibeka ekuqinisekiseni indawo ekhuselekileyo nekhuselekile yefu. Esi siqinisekiso esivela kule nqanaba elisezantsi livumela ukuba ufezekise inani elingaqhelekanga lokulawula ukhuseleko kwaye uncede umbutho wakho usetyenzise ubuninzi beefomati zefu ngokungabi nengozi ekuhloniphekeni kwedatha.
I-9 Iikholeji zoQeqesho eziPhambili nge-Google Cloud Platform
ezaposwa ngomhla18 Sep 2018
ezaposwa ngomhla17 Sep 2018
Isingeniso kwi-GDPR: Ngubani, Yintoni, nini, nini, kwaye kuphi i-GDPR
ezaposwa ngomhla23 Aug 2018
ezaposwa ngomhla03 Aug 2018
Izibonelelo ze-ITIL Isiqinisekiso kunye Nokuba i-ITIL iyadingeka?
ezaposwa ngomhla10 Jul 2018
Ukuqonda iMicrosoft Dynamics 365
ezaposwa ngomhla22 Jun 2018
Ukufuna kweengcali ze-Cyber ​​Security kwi-2018
ezaposwa ngomhla19 Jun 2018
DevOps - Ikamva le-IT Industries
ezaposwa ngomhla15 Jun 2018
Kubaluleke kangakanani iCCNA? Yintoni esifanele siyazi malunga neCCNA?
ezaposwa ngomhla14 Jun 2018
Ukufezekisa nge-AWS Certification
ezaposwa ngomhla13 Jun 2018